Waa maxay RSS? Waa maxay Quudintu? Waa Maxay Isku -Darka Mawduuc? | Martech Zone
Waa maxay RSS? Waa maxay Quudintu? Waa Maxay Isku -Darka Mawduuc?
Axad, Abriil 25, 2021 Arbacada, Oktoobar 13, 2021 Douglas Karr
In kasta oo aadanuhu arki karo HTML, si aaladaha softiweerku u adeegsadaan waxyaabaha ku jira, waa inay ku jirtaa qaab habeysan, oo la akhrin karo oo loogu talagalay luqadaha barnaamijka. Qaabka ah kan caadiga ah ee onlaynka ah ayaa la dhahaa quudin. Markaad ku daabacdo qoraaladii ugu dambeeyay softiweerka baloogga sida WordPress, a feed sidoo kale si otomaatig ah ayaa loo daabacay. Cinwaankaaga quudinta ayaa sida caadiga ah la helaa kaliya marka la galo URL -ka goobta oo ay ku xigto /feed /
Waa maxay RSS? RSS maxay u taagan tahay?
RSS waa dukumiinti ku saleysan websaydhka (caadi ahaan loo yaqaan a feed or quudinta webka) kaas oo laga daabacay ilo - loo yaqaan channel. Quudinta waxaa ku jira qoraal buuxa ama la soo koobay, iyo metadata, sida taariikhda daabacaadda iyo magaca qoraaga. RSS ayaa ka saarta dhammaan qaybaha naqshadeynta muuqaalka ee goobtaada waxayna si fudud u daabacdaa nuxurka qoraalka iyo hantida kale sida sawirrada iyo fiidiyaha.
Dadka badankoodu waxay rumaysan yihiin in ereyga RSS markii hore u taagnaa Runtii Isugeyn Fudud laakiin waxay ahayd Soo Koobid Goob Weyn… Iyo asal ahaan Soo Koobidda Goobta RDF.
Maalmahan waxaa caadi ahaan loogu yeeraa Runtii Iskuduwaha Fudud (RSS) iyo astaanta caalamiga ah ee quudinta RSS waxay u egtahay tan midigta. Haddii aad ku aragto astaantaas degel, waxay si fudud kuu saamaxaysaa inaad qabato URL -ka si aad u gasho akhristaha quudintaada haddii aad mid adeegsato.
Akhristayaasha quudinta ayaa aad caan u ahaan jiray ilaa aaladaha warbaahinta bulshada ay yimaadaan. Hadda, dadka intiisa badani waxay internetka ka raaci doonaan kanaalka warbaahinta bulshada halkii ay isticmaali lahaayeen oo iska qori lahaayeen quudinta. Taas micnaheedu maahan in teknolojiyadda wali aan la adeegsan karin, in kastoo.
Astaanta Quudinta RSS
Kani waa sharraxaad fiidiyow oo duug ah laakiin weyn oo ka socota Farshaxanka Guud oo sharraxaya sida quudintu u shaqeyso iyo sida adeegsadayaashu uga faa'iideysan karaan Iskuduwaha Runtii Fudud (RSS):
Waa maxay Isku -darka Maaddada?
Quudinta RSS ayaa loo adeegsan karaa akhristayaasha quudinta iyo daabacaadda warbaahinta bulshada dhufto. Akhristayaasha quudinta waxay u saamaxaysaa adeegsadayaasha inay iska diiwaangeliyaan kanaallada ay rabaan inay wax akhriyaan si joogto ah oo ay uga akhristaan ​​arjiga. Akhristaha quudinta ayaa ogeysiiya marka ay jiraan waxyaabo la cusbooneysiiyay oo adeegsaduhu wuu akhrin karaa isagoo aan weligiis booqan goobta!
Habkan si otomaatig ah loogu quudiyo waxa ku jira macaamiisha iyo aaladaha ayaa loo yaqaan Isugeynta waxyaabaha.
Aaladaha warbaahinta bulshada ayaa inta badan u saamaxa daabacayaasha inay si toos ah ugu soo dhejiyaan waxyaabaha ay ku jiraan kanaalladooda bulsheed. Tusaale ahaan, waan isticmaalaa FeedPress si aan ugu biiriyo nuxurkayga akoonteyda warbaahinta bulshada ee shaqsi ahaaneed iyo tan xirfadeed ee LinkedIn, Facebook, iyo Twitter. Adeegsiga aalad sida FeedPress ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad la socoto koritaanka quudintaada.
PS: Ha ilaawin inaad rukumo RSS Feed!
Tags: Isugeynta waxyaabahasoo koobitaanka goobta rdfsoo koobid goobta hodanRSSrss feedwarbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada feedmaxay rss u taagan tahaywaa maxay kanaalwaa maxay quudintawaa maxay channel feedwaa maxay goobta rdf oo koobanwaa maxay soo koobid goobta hodanka ahwaa maxay websaydhkawaa maxay kanaalka rsswaa maxay isku duubni runtiiwaa maxay rss
Apr 25, 2007 at 8: 14 PM
Halkaas, Doug. Wax aan runtii fahmay !! Badh baan ku qanacsanahay.
Apr 25, 2007 at 8: 42 PM
Woohoo! Aad baad u dulqaad badneyd, Christine. Waxaan u muuqdaa inaan farsamooyin badan ka helayo qoraalladayda. Waxaan is tusay inay ahayd waqtigii aan gaabin lahaa oo aan ka caawin lahaa dadka qaarkiis inay qabsadaan.
Markaad tahay geek ku dhex jira waxyaabahan, way adag tahay in la xusuusto in dadka kale oo dhan aysan aqoon waxa aad ka hadlayso!
Ogeysiiska ugu dambeeya ee RSS. Qiyaas intaad boggan u jareyso si fudud ereyada iyo sawirada ku jira qodobka… iyadoo lagaa saarayo dhammaan waxyaabaha kale ee faaiidada ku leh. Taasi waa waxa boostadu u egtahay quudinta RSS!
Waxaan kula talin Google Reader!
Apr 26, 2007 at 4: 38 AM
Mid ka mid ah waxyaabaha liistadayda dheer ayaa ahayd inaan weydiisto Douglas inuu qoro sharraxaad yar oo ku saabsan waxa dhabta ah ee RSS is.
Waad ku mahadsantahay shaqo joojintaas ka hor, Doug. (iyo dhiirigelin loogu talagalay qayb cusub oo ku jirta boggeyga, sidoo kale 😉)
Oktoobar 22, 2014 at 11:16 AM
Hadda waxaad la yaabban tahay mowduuca kumbuyuutarka ee lagugu xusuusin doono waqtiga soo socda ee aad adigu isku aragtid mar kale akhrinta Buugga Bilowgii lol.